Pakistana: Baomba Dimy Namely Tanàna Telo Tao Anatin’ny Iray Andro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2012 11:19 GMT
Andro mahatsiravina ny Alarobia 21 Novambra noho ny fanafihan'ny Tallibana ireo Imambargahs, diabem-pisaonana Muharram, sy ireo sampan-draharaha misahana ny fitandroana fahalemana ao Karachi, Rawalpindi, ary Quetta. Vokany, olona 20 no namoy ny ainy ary 43 kosa naratra.
Nanaiky mivantana tsy mitsitsy ny mpitondra tenin'ny Talibana, Ehsan Ullah Ehsanor fa izy ireo no tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana ireo Miozolomana Shiita , ary nivoady fa mbola hisy fanafihana maro sahala amin'izany hitranga amin'ny manaraka.
Olona nanao sorona ny ainy amin'ny fanapoahana baomba (kamikazy) – izay eo amin'ny 17 na 18 taona eo -no nanapoaka ny baomba teny aminy nandritra ny fotoam-pivavahana fisaonana manodidina an'i Dhok Sayidan. Nitovy ny tamin'ny nampiasaina tao Karachi ihany ny teknika nampiasana tao. Baomba roa indray no nifanesisesy nipoaka nifanelanelana efa-polo minitra. Ity fanafihana ity no tena nisianà rà mandrika satria, mpisaona 23, izay ankizy ny 8 no namoy ny ainy.
Human Rights Watch nanameloka mafy ny asa fampihorohoroana atao amin'ireo Miozolomana Shiita ao Pakistana:
@shamama_abbasi: Miara-ory amin'ireo fianakavian'ny maty ao rawalppindi, baomba nipoaka tao karachi, tena asa fampihorohoroana adala sy mampahonena. Salaam Ya Hussyn [Ho ao amin'i Hussain anie ny filaminana]
Maro ireo nanamarika fa tsy dia nahasarika loatra ny asa fampihorohoroana natao tamin'ireo Miozolomana Shiita raha oharina amin'ny fanafihan'i Isiraely an'i Gaza (Jereo ny Tatitra Globalvoices)
@GhaffarH: Shiita am-polony no namoy ny ainy noho ny baomba nipoaka tao Karachi saingy tsy avy ao Gaza ireo niharam-boina ary tsy jiosy ihany koa ireo mpamono olona, araka izany afaka mandehandeha ianao, tsy misy zavatra azo jerena eto.
Rohan naneho hevitra:
Tao amin'ny lahatsoratra bilaoginy, Abdul Nishapuri nanao fanontaniana mitombina:
@Sahfisial: Mitomany mafy an'i Gaza ny vahoaka ao #Pakistan izay 90% amin'izy ireo ihany no nahare fa nifamono ao amin'ny taniny ihany ny #Shiita #Hazara & #Ahmadis!
@basit_saeed: Manohitra ny famonoan'olona ao Gaza izahay saingy tsy mba miraika hanameloka ny famonoana ireo Shiita koa izahay! Fepetra mahasosotra! #Karachi